Goorma ayay Safaaradda Soomaaliye ee Kenya shaqo billaabi doontaa? | KEYDMEDIA ONLINE
Mudo lix bilood ah ayay xirnayd Safaaradda, oo Safiir Tarsana uu Muqdisho ku maqnaa, kadib markii xiriirka labada dal uu xumaaday.
NAIROBI, Kenya - Waxaa dib loo furay safaaradda Soomaaliya ee Nairobi, kadib lix bilood oo ay xirnayd taasoo ka dhalatay xiriirka uu jaray MD hore Farmaajo December 2020.
Safiir Tarsan oo ku laabtay Safaaradda ayaa sheegay in maalinta Isniinta ee soo socota dib u shaqo billaabi doonto Safaaradda, islamarkaana dadkii adeegyada ka rabay ay imaan karaan.
Wuxuu sheegay Tarsan in la xaliyay khilaafkii u dhaxeeyay Kenya iyo Soomaaliya, oo ay hadda labada dal si caadi ah kusoo celiyeen cilaaqaadkooda muhiimka u ah shacabka labada dhinac oo wax badan ka dhaxeeya, sida ganacsiga.
Diblomaasiyiin ajnabi ah ayaa ka qyeb-galay munaasabad kooban oo gudaha Safaaradda lagu qabtay, halkaasoo Tarsan uu ku shaaciyay in u howlgelinta xaruntan diblomaasiyasadeed ama safaaradda ah.
Lama oga waxyaabaha la xaliyay inay qeyb ka tahay arinta badda oo ah qodobada ugu waaweyn ee ay isku hayaan Soomaaliya iyo Kenya, islamrkaana uu jiro guux xoog leh oo ku aadan in Maamulka Farmaajo wax badan ka tanaasulay.
Qatar oo dano gaar ah ka leh Soomaaliya ayaa dhex-dhexaadisay khilaafka labada dowladood, iyadoo Uhuru Kenyatta isha ku hayo kiiska badda in lagu xaliyo meel ka baxsan Maxkamadda ICC.
Inkastoo labada dal heshiiyeen, haddana waxaa wali xayiraad saaran Qaadka Kenya ka imaan jiray, oo lagu bedelay mid Itooboya laga keeno, kaasoo uu madax ka yahay nin la dhashay Farmaajo, oo Xasan Farmaajo lagu magacaabo.
Kenya saameyn ayay ku leedahay siyaasadda iyo aminiga Soomaaliya, waxaana ka jooga Ciidamo lagu qiyaasay illaa 3,500 oo askari kuwaasoo difaacaya Maamulka Axmed Madoobe ee fadhiya Kismaayo.